China Yakagadziriswa Stainless simbi girazi Bhodhoro Munyu Pepper Shaker vagadziri uye vanotengesa | Trimill
Munyu uye mhiripiri zvinozungunusa kana anonzi mabhodhoro ekumaka ndiwo mabhodhoro anoshandiswa mukicheni kutakura zvinonhuwira zvakasiyana. Iwo mavara ari girazi, zvedongo, plastiki, bone china, simbi isina simbi uye zvichingodaro. Mhando dzese dzemabhodhoro ekumisikidza dzavewo "basa rechikoro" revakagadziri, uye kufunga kwakawanda kwakashandiswa pazvinhu, masitayera uye nehunyanzvi. Mune mafashoni maitiro, majagi ekumaka akagadzirwa nesimbi isina girazi uye girazi anoita kunge ari kunyanya kubata maziso. Mitsara yaro yakapfava, maumbirwo akanaka uye zvigadzirwa zvakapusa zvinoita kunge zvinonyanya kufadza kune zvavanofarira zvevazvino. Mutengo wacho wakachipa, uye zvinogona kuve nyore kupedzisa kubata patafura yekudyira.
Inotenderera inochinjika munyu inogunzva ndiyo inonyanya kufarirwa mune inozungunusa akateedzana. Inotsanangurwa nenzira yakapfava uye yakapusa, iine zvemhando yepamusoro zvinodikanwa, uye mavara akasiyana uye masitayera anonyanya kufarirwa nemhuri dzemhando yepamusoro, izvo zvinowedzera ruvara kukicheni. Inowedzera kuravira kwekubika, uye panguva imwechete, zvakare inofadza kune ziso kana yaiswa patafura.
Mwaka yekuzungunusa inogona kushanda neruoko rumwe, izvo zviri nyore. Izvo zvine hutsanana kuchengetedza macondiments uri wega kubva kunze. Kavha yepamusoro inotenderera haina kusvibiswa uye yakachena. Iwe unogona kusarudza makobvu akasiyana emwaka kuburikidza nema calibers akasiyana, uye uashandise zvakawandisa, izvo zvine hutano. Yakaisvonaka, youmbozha, uye yakashongedzwa, inoyevedza yakajeka isimbi simbi yekumisikidza zvirongo inoiswa mukicheni, ayo akafanana nemabasa ehunyanzvi. Ivo vanonyatso kuwedzera kunonaka kwekubika kwevanhu. Ichowo sarudzo yakanaka yekupa shamwari.
Kambani yedu yakanaka mukugadzirwa kwechigadzirwa, kusimudzira uye kugadzirwa, uye inotsigira zvinodiwa nevatengi zvekugadzirisa, kuti iwe unakirwe noupenyu hwekicheni.
Pashure: Nyanzvi Kugadzira Kwemakero Akasiyana ECeramic Flat Burrs
Pepper Mill Uye Munyu Shaker Set
Mugadziri Pepper mukuyi Kofi mukuyi Cera ...
2021 Runako dhizaini yemagetsi munyu uye mhiripiri gri ...